Kidnapping Arman Kamis : Any am-ponja i Haja MAPAR -
AccueilRaharaham-pirenenaKidnapping Arman Kamis : Any am-ponja i Haja MAPAR
08/12/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nitondra fanazavana manodidina ny fakàna an-keriny ilay teratany Karana Arman Kamis ny lehiben’ny Fampanoavana Ambaratonga Voalohany tany Toamasina sy ny komandin’ny vondrom-paritry ny zandarimaria any an-toerana.
Basy kalachnikov sy P.A ary bala miisa 118 no sarona tao amin’ny trano nitanana ity teratany Karana ity. Mitondra ny laharana 6192 ny sasany tamin’ireo bala, ny 109 tamin’ireo bala nitondra ny laharana 04, ny 08 laharana 08 ary ny iray laharana 28. Fiarakodia roa no sarona nandritra ny hetsika nataon’ny manam-pahefana tany Toamasina, ka ny iray Peugeot 309 laharana 6309 TL ny faharoa kosa Ford laharana 2404 TV. Nanao saron-tava ny telo tamin’ireo mpanao kidnapping, niseho tava kosa ny fahefatra. Sarona tao amin’ny trano nitanana an’i Arman Kamis ny jiolahy iray antsoina hoe Jean Paul Etienne (avy any Majahanga). Izy moa araka ny fanazavana nentin’ny lehiben’ny Fampanoavana no niandry an’i Arman Kamis tao amin’ilay trano. Natolotra ny Fampanoavana ireo olona valo voarohirohy tamin’ity kidnapping Karana ity ka notanana am-ponja.
Tsy nisakana ny fizotry ny fanadihadiana sy ny famotorana nataon’ny zandarimaria, ny polisy ary ny lehiben’ny Fampanoavana tany Toamasina ny fahanginan’ireo hainoamanjerin’ny TGV manoloana ny fisamborana an’i Haja MAPAR. Nisafidy io fahanginana io tokoa mantsy ny gazety mpomba an’i Andry Rajoelina. Fomba fiadin’izy ireo tokoa moa izany fahanginana izany, raha tsy hiresaka afa-tsy ny raharaha famotsiam-bola maloto azo avy tamin’ny fanondranana “bois de rose” sy fanodinkodinam-bolam-panjakana an’i Mamy Ravatomanga any Frantsa. Dia mbola izay fahanginana izay hatrany koa no niseho tamin’ity raharaha kidnapping ity.
Mbola haverina eto indray ilay fanontaniana napetraka teto amin’ny gazety roa volana lasa izay nanao hoe: “fa iza loatra mihitsy izao mila vola be izao no toa manao tohivakana ity resaka kidnapping Karana ity?”. Amin’ny fotoam-pifidianana tahaka izao tokoa mantsy no tena mampirongatra ny fakana an-keriny, dia izao iaraha-mahita izao ny fahamarinany!